Gbasara Anyị - Shijiazhuang Langxu Glassware Co., Ltd.
Onye na-ebu kandụl
Ihe ọ .ụ .ụ
iko ahịhịa amị amị
Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 + nke Mmezi nka, Mmepụta, na Ahụmịhe Ndị Ahịa
E guzobere anyị na 2010, na-arụ ọrụ pụrụ iche na imewe, ire na ire nke iko mmiri, iko mmiri, vases, ndị na-ejide kandụl na ngwaahịa ndị ọzọ na-esochi (urukpuru ojii, sandblasting ojii, decals, elu okpomọkụ decals na usoro ndị ọzọ).
Dabere na ụkpụrụ nke "Quality mbụ, mkpa ndị ahịa", ụlọ ọrụ anyị na-enweta nkwado na otuto n'aka ndị ahịa anyị. Ebumnuche anyị bụ "ọnụahịa kachasị mma, kacha mma kacha mma". Ebubatala ngwaahịa anyị na North America, Western Europe, Australia wdg, ihe karịrị mba iri atọ.
Ngwaahịa anyị bụ isi bụ iko dị n'ime kandụl / ihe njide, iko ihe ọ drinkụwareụ, iko mmanya, iko mmanya, iko whiskey, iko mmanya, iko ndozi, iko ashtray & karama, iko teapot & kọfị, iko ice cream, iko iko, efere iko, iko ite na ya. na
A nabata gị ileta ụlọ ọrụ anyị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweela onwe gị ịkpọtụrụ anyị.We anyị ga-anwa ike anyị iji kwado azụmahịa gị.
Ngwaahịa egosipụtara, Ebe nrụọrụ, Ngwaahịa niile